I-Sunny Bradenton Retreat
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguKathleen
Balekela kwindawo yembali yeRiverview yaseBradenton. Umgangatho wesibini wabucala igumbi elinye lokulala, igumbi lokuhlambela elinye elinekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo kwikhaya lethu elakhiwe ngo-1926. Ilungile ukuhlala ixesha elide. Sikwiikhilomitha ezi-5 kumntla we-IMG, iimayile ezi-2.3 ze-N/W ze-Lecom, kunye neekhilomitha eziyi-5.5 ze-N/W zePirate City. Iilwandle ziziikhilomitha ezisi-7 ngasentshona, iindawo zokutyela ezinkulu kunye nokuthenga kufutshane.
Eli libali lesibini lekhaya lesitayela sobukoloniyali ngeminyaka yee-1920. Yakhiwa ngo-1926 kwaye ikwisithili esiyimbali saseRiverview eBradenton. Umlambo uneebhloko ezine ukuya emantla kwaye indawo igcwele amakhaya amadala aseFlorida.
Le yindawo yokuhlala enobuhlobo enepaki ezibhloko ezintathu ukusuka kwikhaya lethu. Ibizwa ngokuba yimbali yaseRiverview ebumelwaneni ngenxa yokuba ihamba ngasemlanjeni okwiibhloko ezine ukusuka kwikhaya lethu.